milina kafe robot, milina mpivarotra kafe - Moton
Moton Technology Co., Ltd. dia orinasa teknolojia manavao, indrindra mifantoka amin'ny R&D sy ny famokarana vokatra fampidirana robotika amin'ny sehatry ny fanjifana. Ny vokatra nasongadinay, ny vokatra antsinjarany marani-tsaina dia efa nampiasaina tany amin'ny firenena maro ary nahazo fiderana be dia be avy amin'ny mpanjifa.
Manana injeniera 18 manana mari-pahaizana isan-karazany ao amin'ny foibe R&D izahay. Izy rehetra dia nahazo diplaoma avy amin'ny oniversite malaza any Shina manana mari-pahaizana bakalorea sy maîtrise ary tena manan-talenta amin'ny sehatry ny fikarohana. Mandritra izany fotoana izany, manana fiaraha-miasa ara-teknika miaraka amin'ireo oniversite malaza any Shina izahay.
Ny toeram-pamokaranay dia ao amin'ny distrikan'i Sujiatun, Shenyang, faritanin'i Liaoning. Manodidina ny 20.000 sqm ny velaran'ny tranobe.
Afaka manao ny famolavolana namboarina araka ny takian'ny mpanjifa izahay. Ny OEM sy ODM dia samy azo ekena ho antsika. Ny fepetra takian'ny mpanjifa no torolalan'ny famokarana.
Manome serivisy matihanina aorian'ny varotra ho an'ny mpanjifanay izahay na avy any Chine na any ivelany. Serivisy an-tserasera dia omena 7x24h. Raha mila serivisy eny an-toerana ny mpanjifa, dia afaka mandefa ny injeniera amin'ny serivisy ho any amin'ny toerana misy olana koa izahay.
2022 New Arrival Factory Direct Hot Mivarotra Min...
Toeram-piantsonan'ny Robot Milk Tea ivelany any Chi...
Tamin'ity fahavaratra ity tany Dalian Shina, MOTEA andian-dahatsoratra robot ronono dite ivelan'ny gara dia nampiharina soa aman-tsara tamin'ny Chinese Cuisine Festival. An-jatony ny fr...
Varotra mafana vokatra Mini Robot kafe Ki...
2021 China Shenyang International Robot Show dia natao soa aman-tsara tao amin'ny Shenyang New World EXPO nanomboka ny 23 ka hatramin'ny 25 oktobra. Nandritra ny telo andro ex...
Fametrahana voalohany ny kafe mini robot ...
Taorian'ny R&D volana vitsivitsy, ny vokatra kiosk kafe mini robot dia napetraka soa aman-tsara tao amin'ny Shenyang International Software Park. Izany i...